बागवानी सबै-रूस संस्थान: सुविधाहरू, वर्णन र समीक्षा
जीवन परिवर्तन को पूर्ण छ, सुधार भएको छ। यो वैज्ञानिकहरू र अनुसन्धानकर्ताहरूले काम कारण हो। उदाहरणका लागि, बागवानी को क्षेत्र मा रूसी प्रजनन र बागवानी र नर्सरी को प्रौद्योगिकी संस्थान जीवनमा नवीनता लागू। यस संस्थाको के हो? त्यहाँ हाम्रो देशमा यस्तै संरचना हो? यी प्रश्नहरूको जवाफ हामी पाउन छन्।
संगठन को इतिहास
बागवानी संस्थान मास्को अहिले संचालित। यसको इतिहास एक विशेष प्रयोगात्मक फल र बेरी स्टेशन को उद्घाटन संग 1930 मा शुरू भयो। यो कृषि मा भइरहेको परिवर्तन जडानमा उठ्दा - बागवानी विकास गर्न सुरु भएको छ, राज्य र सामूहिक फारमहरु मा ठूलो उद्यान राख्नु गर्न थाले। यो अवस्थित कृषि प्रविधी बेरी र संशोधन गर्न आवश्यक थियो फल बिरुवाहरु, साथै बोट को एक वर्गीकरण।
अनुभव फल-बेरी स्टेशन 1960 सम्म अस्तित्व। त्यसपछि यो बागवानी nonchernozem बेल्ट को वैज्ञानिक-अनुसन्धान संस्थान परिवर्तन भएको थियो। संगठन कार्य सामना अघि - समस्या6स्वायत्त गणराज्यहरु र 23 RSFSR शामिल nonchernozem क्षेत्र बागवानी समाधान गर्न। 1992 मा, संस्था यसको वर्तमान नाम दिइएको थियो।
संस्थान हाल छ
सबै-रूस चयन-प्रौद्योगिकी संस्थान आज - एक multidisciplinary अनुसन्धान संस्था हो। यसलाई आफ्नो विगतका गतिविधिहरु गर्व छ। अस्तित्वको वर्षसम्म यो फल र बेरी विविधता संग्रह को एक महान नम्बर विकास गरिएको छ। पनि नस्ल हार्डी र उच्च-yielding प्रजातिहरू, किरा, एक विशेष प्रविधी बाट बाली जोगाउन उपाय विकास गरे।
बागवानी को अवस्थित प्रजनन उपलब्धिहरू प्रौद्योगिकी संस्थान बन्द गर्न जाँदै छ। उहाँले उद्देश्यका धेरै राख्नु अघि:
विभिन्न कम्पनीहरु र सरकारी एजेन्सीहरू को आदेश मा एक वैज्ञानिक र प्राविधिक उत्पादन सिर्जना;
परामर्श, वैज्ञानिक र प्राविधिक सेवा व्यक्तिविशेष र कानुनी निकायहरूको प्रदान गर्नुहोस्।
वैज्ञानिक र अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि
बागवानी सबै-रूस संस्थान बाहिर वहन अनुसन्धान गतिविधिहरु विभिन्न क्षेत्रहरू:
जैव को क्षेत्र मा;
भाइरस को अध्ययन;
soils र मल प्रयोग को अध्ययन;
जेनेटिक्स र नयाँ प्रजातिहरू को विकास;
बोट र जैविक स्रोतको जीन पूल;
खेती प्रणाली क्रप प्रविधी;
आफ्नो गतिविधिहरु प्रभावकारी परिणाम हासिल गर्न रूसी संगठन विदेशी शैक्षिक संस्थाहरू संग cooperates। यस्तो अन्तरक्रिया संस्थान को शुरूआत देखि आकर्षित। संस्था को इतिहास पोल्याण्ड, बुल्गेरिया, फ्रान्स, इटाली र अन्य देशहरूमा साथ छ भनेर पुष्टि गर्छ। कर्मचारी भाग अन्तर्राष्ट्रिय कांग्रेस मा, विदेश तालिम थिए। आज संस्थान संग माल्डोवा, बेलारुस, युक्रेन, काजकिस्तान राम्ररी काम गरिरहेको छ। सँगै विदेशी संस्थाहरू यसलाई संयुक्त अनुसन्धान बाहिर वहन, प्रकाशनहरू तयार।
1962 देखि, बागवानी को संस्थान शैक्षिक गतिविधिमा संलग्न छ। यो त पोस्ट-स्नातक दोस्रो विशेष र उच्च शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी, अनुसार कागजात संग पाठ्यक्रम थियो। स्नातकोत्तर अध्ययन संस्थान मा अब उपलब्ध छ। "कृषि" - भर्ना प्रशिक्षण को केवल एक दिशा प्रस्ताव गरिएको छ। यसमा सम्बन्धित छनौट गर्न चार कार्यक्रम, छन्:
चयन र बीउ बाली;
अंगूर को खेती, फल बढ्दै;
बाली को सुरक्षा;
सामान्य कृषि, क्रप।
बागवानी संस्थान स्नातक विद्यार्थीहरूको लागि उत्कृष्ट अवसर प्रदान गर्दछ। यो एक अनुसन्धान पुस्तकालय छ। यसलाई आफ्नै जानकारी स्रोतहरू को एक ठूलो रकम प्रतिनिधित्व। पुस्तकालयको पनि इन्टरनेट प्रयोगकर्ता प्रदान गर्दछ। यो विदेशी डेटाबेस पहुँच खोल्छ, केन्द्रीय कृषि पुस्तकालय, वैज्ञानिक र प्राविधिक जानकारी AIC हाम्रो देश को सिस्टम।
व्यापार र मूल्य निर्धारण समीक्षा क्षेत्रमा गतिविधिहरु
बिरुवा, ताजा जामुन, फल र तरकारी - यो संस्थाले केही अंक, मास्को खुलेको मा बेच्न चाहने सबै। उदाहरणका लागि, सडक मा स्थित व्यावसायिक परिसर एक Zagorevskoy4यहाँ ग्राहकहरु ताजा जामुन र फल आनन्द उठाउन सक्छौं। एउटै ठेगानामा त्यहाँ व्यापार-सम्बन्धित संस्थाहरू एक थप विन्दु हो। फल बिरुवा, बेरी बिरुवाहरु, Ornamental बिरुवाहरु - यो रोपण सामाग्री प्रस्ताव।
बागवानी संस्थान बिरुवा को मूल्य, प्रतिक्रियाहरू द्वारा प्रमाणित भिन्न छन्। उदाहरणका लागि:
जस्तै "विजय", "मूर्ति" को रूपमा columnar स्याउ प्रजातिहरू, "Ostankino", "राष्ट्रपति", कन्टेनर जमीन (- 1 वर्ष, उचाइ - संयंत्र को उमेर 1 मिटर देखि 0.8) गर्न 700 rubles लायक छ;
एक बिरुवा, तर खुला जराको साथ बारेमा 500-600 rubles लागत;
Aster दीर्घकालीन रूपमा फूल संस्कृति मा, 200 250 गर्न rubles (खुला-जरा) बाट मूल्य दायरा;
3 वा4वर्षको खुला-जरा को उमेर मा herbaceous peony 1500 देखि 2000 rubles छ।
छलफल संस्थान देश मा केवल एक छैन। रूस मा, त्यहाँ अझै पनि अन्य यस्तै संगठनहरूको छन्। तिनीहरूलाई को - को बागवानी र अंगूर को खेती को उत्तर-प्रार्य गठन अञ्चल अनुसन्धान संस्थान। यसलाई देखि 1931 अवस्थित र क्रास्नोडार मा स्थित छ।
यो संस्थाले, रूसी संस्थान जस्तै, अनुसन्धान र शैक्षिक गतिविधिमा संलग्न छ। उहाँले धेरै उपलब्धिहरू छ:
यो प्रारम्भिक निदान र स्याउ फल भण्डारणमा तीतो पिट गर्न predisposition को खोज को एक विधि प्रदान;
यो सेतो तालिका रक्सी आधार को उत्पादन को एक विधि विकास;
यसलाई घ त्यसैले slaboroslyh निलंबन मा स्याउ रूखहरू बढ्दै र को लागि एक विधि विकास गरे।।
अंगूर को खेती र बागवानी को संस्थान मा शैक्षिक गतिविधिहरु
क्रास्नोडार मा जवान र प्रतिभाशाली वैज्ञानिकहरू खाँचो, बागवानी र अंगूर को खेती मा काम अनुसन्धान संस्थान,। उहाँले स्नातक स्कूल खोलियो किन हो। यसलाई प्रशिक्षण तीन क्षेत्रहरु, धेरै प्रोफाइल हो:
"कृषि" ( "बोट सुरक्षा", "अंगूर को खेती, बागवानी," "बीउ र एक्स-बिरुवाहरु संग प्रजनन"।);
"औद्योगिक जैव र पारिस्थितिकी।"
निष्कर्षमा, यो दुवै अनुसन्धान संस्थाका को वैज्ञानिकहरू बागवानी, अंगूर को खेती को क्षेत्रहरु को विकास गर्न महत्वपूर्ण योगदान गर्ने टिप्पण लायक छ। तिनीहरूले विकास पूरा, औद्योगिक गतिविधि आफ्नो परिणाम शुरू, बाहिर विभिन्न वैज्ञानिक अनुसन्धान बोक्न। महत्वपूर्ण भूमिका दुवै पोस्ट-स्नातक पाठ्यक्रम मा संस्थाहरू द्वारा प्ले। यसलाई भविष्यमा नयाँ आविष्कारहरू गर्न र विज्ञान कम्तिमा महत्वपूर्ण हाइट्स हासिल गर्न पाउनेछ व्यवसायीक तयार।
सूर्यमुखी भोजन: GOST, संरचना, निर्माता
Tsarskoselskaya नस्ल कुखुरा: वर्णन, कैरेक्टराइजेशन र समीक्षा
के mulching छ र कस्तो लाभ यसलाई ल्याउँछ
अन्न र क्रमबद्ध को सफाई को लागि कृषि मिसिन
कांस्य टर्की: नस्ल को समीक्षा
केही अवस्थामा, एक सिमेन्ट waterproofing?
खट्टा क्रीम, मेयोनेज र kvass संग Okroshka
कसरी पुरानो Svetlana Permyakova, Lyuba को "interns" प्ले?
एक घर वा सबै चींटियहरुलाई लागि घर मा चींटियहरुलाई उन्मुक्ति कसरी
कमेडी "कुरियर प्रमोदवनमा देखि": अभिनेता, भूमिकाको, षड्यन्त्र, सारांश
नकारात्मक र सकारात्मक समीक्षा: "Fibos" फिल्टर
इस्लामी स्थिति: सौन्दर्य र पूर्व को बुद्धि को आचरण
"Licentiate Vidriera"। सारांश उपन्यास Cervantes
मान्छे पानी एलर्जी इतिहास Reychel Uorik बस्न रूपमा